NK | राष्ट्रपतिलाई पार्टीको विवादमा नतानौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रपतिलाई पार्टीको विवादमा नतानौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं :- तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच कटाक्ष चलिरहेका बेला एमालेका बैचारिक नेता शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरको एक अन्तर्वातामा भनेका थिए– केपी ओली र प्रचण्डमा कैयौं समानता छन्, ती समानताले कुनै दिन दुबै पार्टीलाई एक बनाउने निर्णय भयो भने पनि आश्चर्य हुँदैन । नभन्दै ओली र प्रचण्डले आश्चर्यजनक ढंगले पार्टी एकताको निर्णय गरे ।
यो केपी ओली अध्यक्ष भएपछिको कुरा हो । चलाउन मैले नै स्कूल विभाग चलाएँ, तर मलाई प्रमुख हुन दिइएन । पार्टीभित्र एउटा मनोविज्ञान के छ भने, शंकर पोखरेलको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कुरा हुँदा चाहिँ विमति राख्ने र विवाद गर्ने खालका कुरा मुख्य नेताहरुमै पनि देखिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले मेरो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालले असहमति जनाउनुभएको कुरा नयाँ होइन । यदि शंकर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनथ्यो भने इञ्चार्जवाला विवाद दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा चर्चामा आउने नै थिएन । पार्टी राजनीतिमा मेरो भूमिकासँग जोडिएर पनि यो विषय (एक व्यक्ति एक पद) चर्चामा आएको होला ।
माधव नेपालले औपचारिक रुपमा त्यो तहमा (ओली एक पद छाड्नुपर्ने) भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको पार्टी जिम्मेवारी होइन । जसरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीको जिम्मेवारी होइन ।
वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष सिफारिस गर्नु, झलनाथलाई पहिलो वरिष्ठको बरियतामा लैजानु जस्ता घटनाक्रमले माधव नेपाललाई एक्ल्याउने योजनाबाट त होइन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि ?
त्यसो भए एउटा कुरा चाहिँ भन्नुस् कि माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर भागबण्डा खोजेपछि केपी ओलीले सिधै प्रचण्ड र वामदेवहरुलाई मिलाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै एकता प्रक्रियाको ढिलाई तोड्न खोज्नुभएको हो ?
तपाईले करीव तीन वर्षअघि अनलाइनखबरकै अन्तर्वार्तामा जतिबेला केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो ओली र प्रचण्ड बोल्ड निर्णय गर्ने नेता भएकाले कुनै पनि बेला यिनीहरुले पार्टी एकतासमेत गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो र त्यो मिल्यो पनि । आज भन्नुस् कि ओली र प्रचण्डबीच पार्टी सञ्चालनमा नयाँखालको एकता भएको हो ?
पार्टी एकतापछि माधव नेपालले आफ्नो प्रभाव देखाउन लागेका बेला दुई अध्यक्षको एकताले उहाँको स्पेस खुम्चिएको हो ?
स्पेस त उहाँ पार्टीको बरिष्ठ नेता हो नि, त्यही हो स्पेस । अलग्गै समूहको स्वार्थ भन्ने हुन्छ र ? एउटा बलियो पार्टीको बरिष्ठ नेता हो उहाँ ।
त्यसोभए केपी ओली र प्रचण्डको तर्फबाट जबजको एउटै दस्तावेज जान्छ होला त महाधिवेशनमा ?
आउने अधिवेशन हामी सहमतिमा गर्छाैं भनेर उहाँहरुबीचमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । त्यो कुरालाई आधार बनाउँदाखेरि त एउटै दस्तावेजको आवश्यकता पर्छ । दुईटा अध्यक्ष मिलेर एउटै दस्तावेज ल्याउनुभयो भने त पार्टी झन् बैचारिक राजनीतिक हिसाबले एकतावद्ध पनि हुन्छ ।
तपाई तत्कालीन एमालेभित्र विशेष गरी अध्यक्ष ओलीको निकटमा रहेर संगठन र विचारको मामिलामा अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले मुख्यमन्त्री भएर काठमाडौं बाहिर रहँदा पार्टीमा स्पेस खुम्चिएको महसुस गर्नुहुन्न ?
भाषण गर्न पाइएन, मिडियामा बेलाबखत समाचारको विषय बन्न पाइएन भन्ने त होला तर राजनीतिक कार्यदिशा कार्यान्वयनका हिसाबले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण नै छ । स्रोत अनलाइन खबरबाट